जनकपुरमा सडक विस्तार अभियान, उद्योगपति ओम शर्राफ र पूर्व मेयर बजरंग साहले घर तोड्न किन रोके ? – doodhmati || dudhmati
Home / समाचार / जनकपुरमा सडक विस्तार अभियान, उद्योगपति ओम शर्राफ र पूर्व मेयर बजरंग साहले घर तोड्न किन रोके ?
Sujeet Jha June 7, 2018	समाचार 4,430 Views
जनकपुरको पुरानो बजार सोनापट्टीमा सडक विस्तार अभियान प्रभावकारी रुपले अगाडी बढीरहेको बेला दुईजना प्रमुख व्यक्तिले आफ्नो घर तोड्ने कार्य रोकेका छन । महावीर चोकमै रहेको पूर्व मेयर बजरंग प्रसाद साह र उद्योगपति ओम प्रकाश शर्राफले घर तोड्ने कार्य शुरु गरेका थिए । शर्राफले आफ्नो घरको छज्जीको केही भाग तोडि पनि सकेका थिए । तर उहाँले आकस्मिक ढंगले घर तोड्ने कार्य रोकेका छन ।
यही स्थिति पूर्व मेयर साहको पनि रहेको छ ।
साहले आफनो घर तोड्न बाँसहरु पनि गाडि सकेका थिए । तर शर्राफले कार्य रोकेपछि मेयर साहले बाँसहरु हटाएका छन । केहीले साहले बाँस हटाएपछि शर्राफले घर तोड्ने कार्य रोकेको बताई रहेका छन । तर कसले पहिला कार्य रोके त्यसको चर्चा महावीर चोकमा निक्कै जोडका साथ चलि रहेको छ ।
पुरानो बजारमा सडक विस्तारको कार्यलाई रोक्न केही व्यक्ति लाग्दा पनि अधिकांश व्यक्ति घर तोडेर सहयोग गरि रहेका छन ।
महावीर युवा कमिटीका पूर्व अध्यक्ष प्रमोद कुमार साहले केहीले आफ्ना घर तोड्ने केहीले नतोड्ने यो राम्रो भएन नगरपालिकाले गम्भिरता देखाउनु पर्ने बताउनु भयो । उहाँले यस सम्बन्धमा जनकपुर उपमहानगरपालिकाका उपमेयर रीताकुमारी मिश्रलाई टेलिफोन गरेर सडक विस्तार कार्य किन प्रभावकारी भई रहेको छैन प्रश्न समेत गरेका छन ।
Tags ओम प्रकाश शर्राफ बजरंग प्रसाद साह
Previous पोलिथिन विस्थापित गर्न जनकपुरमा कपडाको झोला वितरण अभियान शुरु गरेका हौँः कृष्णचन्द्र साह, सामाजिक कार्यकर्ता
Next लालबाबु राउतके मुख्यमन्त्रीसँ हटएके प्रश्ने नहि अछिः शेषनारायण यादव, प्रदेश सचिव संघिय समाजवादी फोरम नेपाल